NVIDIA Jetson Nano: Inoshamisa AI AI Bhodhi | Linux Vakapindwa muropa
NVIDIA ine huvepo hwakakosha mumunda wema neural network nehungwaru hwekunyepedzera neyakaomarara. Uchapupu hweiyi inoshamisa board yeNVIDIA Jetson Nano kugadzira mapurojekiti anoenderana neyakagadzirwa neural network uye AI, kunyangwe iwe uri mudzidzi, kana kana iwe uchida kugadzira chimwe chinhu chakakomba.
NaJetson Nano haufanire kushandisa mari yakawanda kuwana Hardware yerudzi urwu rweprojekti, asi une bhodhi rekuvandudza kweanopfuura pamusoro pe € 100. Mutengo wakaderera kana iwe ukafunga izvo mamwe masystem akafanana anodhura uye nezve zvese izvo zvinopihwa neiyi bhodhi ...
1 Chii chinonzi Jetson Nano?
Chii chinonzi Jetson Nano?
NVIDIA Jetson Nano chirongwa chinobvumidza kuvandudzwa kwemaitiro eAI nemutengo unodhura uye saizi yakadzikiswa. Mune mamwe mazwi, iri "iyo Arduino" yepasirose yekugadzira neural network. Ndokusaka iri kuwana mukurumbira uye kune atove akawanda mapurojekiti akavakirwa pairi.
Nebhodhi rekuvandudza iri unogona kugadzira akati wandei mapurojekiti, zvese zvekushandisa kweIOT, sekune mamwe akavakirwa pamarobhoti, masystem akangwara anoita nenzira kwayo kuongorora akateedzana mamiriro, kudzidza kwakadzama, kuzivikanwa kwechinhu uye chiratidzo chekunyepedzera, nezvimwe. Uye vese vane diki pcb yemasentimita mashoma ...
Ehe zvako yekuvandudza kit Inoenderana neLinux, saka unogona kukura neNVIDIA Jetson Nano kubva pane yaunofarira distro. Uye zvakare, iwe unozoshandisa akadai akakurumbira mapurojekiti sePyTorch uye TensorFlow, ari akavhurika sosi.
NVIDIA Jetson Nano ane zvimwe hunyanzvi hunhu inokatyamadza, ine hunyanzvi hwe472 GFLOPs, kuita kusinga fungidzike kwehukuru hwayo nemutengo uye ine simba rakaringana kumhanyisa huwandu hukuru hweAI algorithms zvakatsetseka. Iwe unogona kunyange kumhanyisa akawanda akasiyana neural network panguva imwe chete nekuda kwezvakasiyana zvinangwa.
Parizvino pane 2GB modhi mune pre-kutengesa uye neWiFi pamutengo wakaderera we anenge madhora gumi nemashanu.
Izvo zvakasara zve features Izvo zvaunofanira kuziva nezveNVIDIA Jetson Nano ndeaya:
NVIDIA Maxwell GPU ane 128 CUDA cores.
16GB yemukati yekuchengetedza eMMC 5.1 flash
MIPI CSI-2 zviteshi zvekhamera, Gigabit Ethrnet (RJ-45), HDMI 2.0 kana DP 1.2, DSI, PCIe, USB 3.0 uye 2.0, SDIO, SPI, I2C, I2S, uye GPIO.
Kushandiswa 5-10w, simba rakadzikira rekuita kwayo.
Mamwe mashoko - NVIDIA Jetson Nano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » NVIDIA Jetson Nano: inonakidza AI yekuvandudza bhodhi
Recalbox 7.0 inouya neRPI rutsigiro, zvigadziriso zveNetPlay, mitambo yakatangwa-uye nezvimwe